यस साता रु. तीन अर्ब बढीको कारोबार « Sansar News
यस साता रु. तीन अर्ब बढीको कारोबार
२५ मंसिर २०७३, शनिबार १४:११
२५ मङ्सिर, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु तीन अर्ब २८ करोड ७६ लाख ६२ हजार बराबरका ४२ लाख ९८ हजार दुई सय कत्ता सेयरहरु खरिदबिक्री भएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जकाअनुसार कुल १५४ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको हो । गत साता १५२ कम्पनीको रु पाँच अर्ब ८३ करोड २५ लाख ३५ हजार बराबरका ७४ लाख ६१ हजार तीन सय १० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका थिए ।